Geessituu haaraaramada ykn geessituu filatame gulaala. Geessituun kornyoo faayilii Intareetii irraa ykn sirna naannoo keeirraa.
Korkoddii HTML maqeeffame gulaluu ykn ramaduu nidandeessa, ykn Toorbarruu kan iddoo murta'aa galmee keessaa ibsuu dha.
Cancala Dhangii - Arfii - Geessituufili
Amala geessituuf ifteessi.
Enter a URLfaayilii banuu barbaadduuf galchi,yeroo geessituu cuqaastu. Goodayyaa galtee yoo hin ifteessuu hin dandeenye, fayilichii galmee ammee ykn goodayyaa keessatti bana.
<A HREF="http://www.sun.com/" NAME="Nametext" TARGET="_blank">Yaadannoo</A>
Maqaa goodayyaa faayilii kornyaate keessatti banuuf barbaadde, ykn goodayyaa durmurtaa`aa tarree irraa galchi. Sanduuqa kana duwwaa yoodhiifte, fayiliin kornyate foddaa iyyaafataa ammee keessatti bana.
Faayiliin goodayyaa maqeeffame galmee ammee HTML keessatti bana.
Faayiliin goodayyaa ammee keessatti bana.
Faayiliin fuula haaraa keessaa bana.
Faayiliin goodayyaa haadhoo kan goodayyaa ammee keessaa bana. Yoo goodayyaan haadhoo hinjirre, goodayyaan ammee ni fayyada.
Faayiliin irra keessa goodayyaa sadarkaadhaan bana.
Dirqaalawwan Dhaangessuu geeituudhaaf ifteessi.
Kornyoowwan hin imale
Title is: Geessituu